Wasiirkii ugu horeeyay oo laga helay cudurka hargabka Shiinaha - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wuxuu qufuc la soo fadhiistey goob uu ku qabanaayay shir jaraaid wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Iiraan, kadibna waxa waxyar kadib lagu helay inuu qabo cudurka hargabka Shiinaha ee ka soo bilaabmay gobol ka mida dalkaas. Iiraan ayaa noqotey dalka afraad ee ugu badan hadda ku faafista cudurkan.
Cudurka ayaa intiisa badan calaamadihiisu yihiin khafiif waxase soo xumeeyay tirada dadka ee uu halmar gaarayo oo u eg in aan la xanibi karin. Wadanka Talyaaniga iyo Koofurta Kuurita ayuu faro ba’an ku haysa hadda.
Ayadoo Iiraan lagu eedeeyay inay qarinayso tirada dhabta ah xagga Shiinaha laftiisa oo ah xudunta cudurka ay yaraanayso tirada dadka qaadaya.
Wasiirka ayaa saacado kahor u muuqdey inuu bastii yahay xilligaas oo uu qabanaayay shir jaraaid, oo weliba dhidig waaweyn ia soo baxaayay. Dhowr mar ayuu Ku hor qufucay. Haddana waxa la geliyay takoorid ayadoo lagu dabajiro intii uu la kulmeyba in la takooro.
Wasiirka ayaan xiran maaskaro taas oo Ka dhigin inuu qabadsiiyay dad faraban. Cudurkan ayaa u baahan keliya gal qof oo sida.